watchOS 5.1.2 pamwe neECG application, pamwe nezvinetso zvitsva | Ndinobva mac
Imwe yedzidziso dzaitarisirwa dzewatchOS dzakaburitswa. Kutevera zuro kugadzirisa kune macOS uye IOS shanduro, watchOS 5.1.2 inosvika nhasi inobvumira Apple Watch Series 4 vatengi kuita uchishandisa iyo ECG app uye ita maelectrocardiograms nekungoisa munwe wako pakorona yeApple Watch yedu.
Mukuvandudza kwemasikati ano, kuwedzera kune zvakajairika mashandiro uye kugadzikana yeiyo system kazhinji, isu tinowana matambudziko matsva, pachiso chikuru cheiyo infograph wachi uye modular infograph, kwatinowana nguva.
Apple pachayo inotsanangura basa reECG reChikamu 4 seinotevera:
Iwo ma electrode akavakirwa mukoridhe yedhijitari uye neshure girazi inoshanda pamwe chete neiyo ECG app, kuverenga iwo magetsi magetsi kubva pamoyo wako. Ingobata korona yedigital kuti ibudise ECG waveform mumasekondi makumi matatu chete. Iyo ECG app inogona kuudza kana moyo wako mutinhimira uchiratidza zviratidzo zveatrial fibrillation (fomu yakakomba yekusarongeka kwemoyo rhythm) kana sinus rhythm, zvinoreva kuti moyo wako uri kurova mune yakajairika pateni.
Kurova kwega kwega kwemoyo kunotumira simba remagetsi Nepurogiramu yeECG, Apple Watch Series 4 inogona kuverenga nekurekodha zvishuwo izvi nekubatanidza iyo denderedzwa iri pakati pemoyo wako nemaoko maviri. Iyo inokonzeresa ECG waveform, maratidziro ayo, uye chero zvinyorwa zvawakanyora nezvezviratidzo zvinoenderana zvinongo chengetwa muapp yako yehutano. Iwe unogona kuvagovana nachiremba wako uye kuita hurukuro nezve hutano hwako.
Dzimwe shanduko dzinogamuchirwa neichi chitsva chitsva chinja muControl Center yekushandisa Walkie-talkie. Kana zviri matambudziko, muBeta takaona mifananidzo yeTsvaga shamwari dzangu, imba, tsamba, Mepu, Meseji, Nhau, Runhare uye Remote Control. Isu takawanawo kugadzirisa mune iyo matikiti uye mubairo makadhi muapp Chikwama. Zvese mune zvese, hukuru hukuru hweApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Inoburitsa WatchOS 5.1.2 Iine ECG App, Zvakare SeMatambudziko Matsva
Ichave iri muUSA nekuti hazvishande kwandiri pano.
Ziva nguva dzese mutengo weBitcoin nekuda kweBitcoin Taskbar, ikozvino inowanikwa mahara
Microsoft Edge, Microsoft webhu bhurawuza, iri kuuyawo zviri pamutemo kune macOS